Madaxweyne Farmajo oo furay kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka - Halbeeg News
Madaxweyne Farmajo oo furay kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka
MUQDISHO(HALBEEG) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo furay kalfadhiga 4-aad ee Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay dadkii rayidka ahaa iyo askartii ku shahiiday falkii argagixisanimo ee saaka ka dhacay Xarunta Degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Munaasabadda furitaanka kalfadhiga 4-aad ee golaha shacabka oo lagu qabtay xarunta generaal Kaahiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeyb galay, madaxda dowladda federaalka, xubno ka tirsan maamul goboleedyada, wakiilada beesha caalamka iyo marti sharaf kale.
Dhanka kale, Maxamed Mursal ayaa tilmaamay in golaha shacabka ay u qabsoomeen wax badan asaga oo sheegay in golaha uu meel mariyay , xeerka hab maamuuska lagu aas aasay baarlamanka midowga Afrika,.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in mudaneyaasha ay isla garteen in baarlamaanka uu ka qeyb qaato caawinta dakii ay saameysay fatahaadi.
Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in golaha shacabka xiligan ay horyaalaan howlo badan kuwaasoo ay ka mid tahay dastuurka ku meel gaarka ah, oo hadda ay ku socoto dib u eegis isagoo ka dalbaday guddiga gacanta ku haya dib u eegista dastuurka inay sida ugu dhaqsiyadaha badan golaha u horkeenaan cutubyada dib u eegista lagu sameeyay.
Mursal ayaa xusay in hogaanka golaha shacabka ay ku guuleysteen in xafiisyo loo helo guddiyada joogtada ee golaha shacabka kuwaasoo hadda howlahooda gaarka ah ku qabsada.
Guddoomiye Mursal ayaa tilmaamay in golaha hadda ay horyaalan hindise sharciyeedyada, midnimada iyo doorashooyinka, 2021-ka.
Dib u dhac ku yimid furitaanka kalfadhiga 4aad ee Aqalka Sare
FIFA oo garsoorayaal Soomaaliyeed tababar uga furtay Muqdisho